Umvelisi wezityalo ezikhupha umgubo wepowder-Scienceherb
Izinto zokuthintela izityalo
Izinto zokuthambisa ezi-Herbal
Ukuqinisekiswa komgangatho wesayensi yesayensi
Kangangamawaka eminyaka, amayeza asetyenzisiweyo, afundwe, kwaye abhiyozelwa ngokweempawu zawo zonyango.
Eyona nto iphambili kwi-Scienceherb kukuqinisekisa ukhuseleko lweemveliso zamakhambi. Imigangatho yamayeza Herb kunye ne-Herbal Extracts 'imigangatho ebandakanya oku: ingaphandle le-herb, umbala kunye nokudla okuziinkozo, incasa, ivumba, ubungakanani be-mesh, uxinano, ukunyibilika, ubungakanani kunye nohlalutyo lobungakanani bezinto eziphilayo kunye nemixube eyenziwe ngumenzi, ilahleko ekomiseni, kwintsalela yokutsala, isinyithi esindayo, Intsalela yezibulala-zinambuzane, uhlalutyo lwe-Microbiological, ukufunyanwa komxholo wokukrexeza, njl njl. Ukuze kuthobele loo mgangatho mgangatho ungqingqwa, iSayensiherb yamisela iNkqubo yokuSebenza (SOP) kwinqanaba ngalinye. Kuphela ziibatch ezidlule kwimigangatho yethu yovavanyo oluqatha kunye neenkqubo zokuhlola ezinokukhutshwa.
I-scienceherb egxile ekuqulunqweni nasekuvelisweni kwezityalo zemveliso yezamayeza. Idityaniswe neziphumo zethu zophando kwimisebenzi yezityalo, sinikezela ngemveliso ekumgangatho ophezulu yonke kunye nezisombululo zesicelo sokondla impilo, ukongeza ukutya, kunye namashishini okhathalelo lomntu.
Uyenza njani imveliso elungileyo ye-Extracts
Izinto ezishicilelweyo ezingafunekiyo zeSOP
Umgangatho wezinto ezingalunganga wahluka kakhulu ngokusekwe kwiindidi zazo, ukukhula kweemeko, ukukhula kweminyaka, iqela elisetyenzisiweyo, indlela yokulungiselela, iimeko zesitokhwe, njl njl. Ukuze kuqinisekiswe umgangatho osisigxina kunye nozinzileyo wokukhupha, kubalulekile kwi-SOP yesixhobo seRaw yesiqhelo. Amanqaku aphambili abandakanya:
Uqinisekiso lweeNdawo ezikhutshelwa ngaphandle
Ukuqinisekiswa kokumiselwa kweentlobo ezichanekileyo, imvelaphi kunye nomgangatho wamayeza amaTshayina. Inkqubo yokungqinisisa yeSciherb ijolise ekuthinteleni ukusetyenziswa kwamayeza e-inauthentic, nokuba kungokuchongwa okungalunganga okanye endaweni yeemveliso zokulingisa.
Izinto ezikhulayo kwiimeko ezikhulayo
I-TCM ye-herbalism igxininisa ithiyori ye-Di Dao kuyo yonke. I-Dao Di herb ichazwe njenge-premium herb yokuba iveliswe kwimimandla ethile yejografi kugxilwe ngakumbi kulimo kunye neendlela zokusebenza ukusukela kwi-Tang Dynasty (618 - 907 CE) kwimbali ende, njengeBai Shao (Bai Shao / White Peony yaseBozhou) , U-Huai Di Huang (Di Huang / Rehmannia we-huaiqing yakudala, uHenan), uNangxia Gou Qi (Gou Qi / uLicium Fruit we-Ningxia).
Imveliso yokukhulisa iminyaka kunye neqela elisetyenzisiweyo
Imithambo eqokelelwa ngaphambi kokuvuthwa inokubangela umgangatho ophantsi kakhulu. Njenge-Astragalus, ngokwesiko eyona ilungileyo kufuneka ithwele iminyaka emi-5 ~ 6 ubudala ngobubanzi be-2 ~ 3cm, kwaye iqela elisebenzisiweyo liyingcambu. Amakhambi asebenzisa iikhaka ezifana ne-Eucommia kufuneka abe malunga ne-10 ~ 15 yeminyaka ubudala ngobukhulu be-3 ~ 6cm.
Izicoci zoKhuseleko lwezeMpilo
Ibhetshi nganye yamayeza kufuneka ihambe ngokuvavanywa kokhuseleko lwezempilo phambi kokuba uhambele phambili. I-Scienceherb ithatha indlela yovavanyo olubanzi kubandakanya: I-Sulfur Dioxide diagnost ● Ukufunyanwa kweZibulala-zintsholongwane ● Ukufunyanwa kwe-Aflatoxin ● Intsimbi enkulu
Inkqubo yokukhutshelwa ngaphandle kweSOP
Ngokungafaniyo kunye neekhemikhali zokwenziwa / iziyobisi, ukubekwa kwamayeza kunobunkunkqele ngakumbi, ke ngenxa yoko izicatshulwa zemichiza zihlala zingumxube woluhlu olunye okanye iqela lezinto. Kukuchaphazela imichiza 'yezinto ezininzi ezahlukileyo ezichaza ukuba yinto ekujolise kuyo ngamachiza, ngenxa yoko ukugcina umzimba womntu ukwimpilo elungeleleneyo xa iyonke. Ngokucacileyo ayinangqondo yokugweba umgangatho ngenxalenye ethile yomenzi. Umsebenzi we-SOP yeNkqubo yokukhupha amanzi ukugcina uzinzo lomgangatho. Amanqaku aphambili abandakanya:
Nje ukuba iithambi ezilungileyo zikhethwe, ziyacocwa kwaye zilungiswe ngokomgaqo olungiselelwe loo mfuno. Umdaniso kunye nezinye izixhobo zangaphandle zisuswa ngocoselelo, kwaye amayeza ke asikiwe okanye alungiswa ngeendlela ze-pao zhi zesiko ngaphambi kokuba zikhutshwe. Iindlela ezahlukeneyo zikaPao Zhi (iindlela zokulungiselela) zinokwenza umgangatho we-herb uhluka kakhulu.
Isicatshulwa kunye noQokelelo
Amayeza ahlukeneyo anokuba neempawu ezahlukileyo kwaye ke kufuneka athathe inkqubo eyahlukeneyo yokukhupha. Kwimifuno emininzi sisebenzisa kuphela amanzi acociweyo njengokunyibilikiswa kwesinyibiliki. Ubushushu obuchanekileyo bokukhupha kunye nexesha lihlukile ku-herb nganye kwaye ilawulwa ngokungqongqo. Ingakumbi kumayeza aqukethe izinto ezibuthathaka bubushushu, inkqubo enobushushu obuphantsi inokugcina ubushushu bendawo yemithambi enokuchaphazeleka ngenye indlela xa kuboniswa amaqondo obushushu aphezulu.
Ukubuyiselwa kweoyile okuyimfuneko
Inkqubo enye ebaluleke kakhulu yokutsiba iifektri ezininzi iquka ukuqokelelwa kweoyile enuka amayeza, iinto ezo zihlala zingasasebenziyo. Inkqubo yokubuyisa i-oyile ebalulekileyo ye-Scienceherb isebenzisa inkqubo "yokufaka i-oyile" eqhagamshelwe kwinkqubo yokukhupha kunye nokugcina iioyile ezingenaxhala. Baxubekile babuyiselwa kwizicatshulwa ekupheleni kwenkqubo. Ioyile eziyimfuneko zonyusa ukusebenza kwazo kunye nokuhambisa amayeza ngephunga lawo lendalo.
Izinto ezingamanzi ezigxinisiweyo ezomisiweyo zisebenzisa ukomisa isantya esiphezulu sokutshiza ngesitshizi. Ngeli xesha lale nkqubo, ingqokelela yemichiza engamanzi iye yenziwa ngokuzenzekelayo kwimibhobho echanekileyo, ephoswa ngokungxama kumjelo oshukumayo wegesi eshushu. Iqondo lobushushu lamachaphaza lonyuka kwangoko kwaye amathontsi amile kwangoko kumasuntswana ayindawo. Yonke inkqubo yokomisa igqiba ngemizuzwana embalwa kwaye ubukhulu becala ihlale ingamakhambi.
Kugqitywe uvavanyo lweSOP
Iziphumo zovavanyo zinokwahluka ngenxa yendlela eyahlukeneyo yokuvavanya, izixhobo, kunye nokulungiselela isampulu, njl. Ukuvavanywa kwelabhoratri yokujonga izinto ngokuchanekileyo, ukukhangela iisampulu ezininzi kwibatch nganye, ukulinganisa ubungakanani bemveliso kunye nokuqinisekisa ukhuseleko kwimveliso. Olu vavanyo lubandakanya oku kulandelayo:
I-UV / HPLC / UPLC-MS-MS yokulinganisa izithako eziphambili ze-bioactive.
I-FFETTM (i-Fingerprint Full-Spectrum Extract Technology) yokugweba ubunjani bemveliso
I-AAS / ICP-MS yokuvavanya izinyithi ezinzima.
I-GC-MS-MS yokuqinisekisa ukhuseleko ngokuvavanya ubukho bezinto ezisasaza ukubulala izitshabalalisi.
Isayensi yokuvavanya imicrobiological yokujonga isikrini kwi-E. coli, isalmonella kunye nezinye izinto ezahlukeneyo ezinobunganga bio-ezifana nokubumba okanye igwele
Ukukhupha ioyile yegalikhi (8000-78-0)